Ricky Gervais သည် David Brent: Netflix ရှိလမ်းပေါ်ရှိဘဝကိုလွှတ်တင်မည့်နေ့ကိုကြေငြာခဲ့သည် - Netflix မူရင်း
Ricky Gervais သည် David Brent: Netflix ရှိလမ်းပေါ်ရှိဘဝကိုလွှတ်တင်မည့်နေ့ကိုကြေငြာခဲ့သည်
လန်ဒန်၊ အင်္ဂလန် - သြဂုတ် ၁၀ - (ဘင်) Bailey Smith, Andy Burrows၊ Michael Clarke, Ricky Gervais, Steve Clarke နှင့် Stuart Wilkinson တို့သည်သြဂုတ် ၁၀ ရက်၊ Odeon Leicester ရင်ပြင်၌ကျင်းပသော '' David Brent: Life on the Road '' ကမ္ဘာ့ Premiere သို့တက်ရောက်သည်။ 2016 လန်ဒန်, အင်္ဂလန်မှာ။ (Dave J Hogan / Dave J Hogan / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
သင် Stranger Things ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက Netflix on Glitch ကိုကြည့်ပါ Netflix ဟာလူငယ်ဘားရက်အိုဘားမား၏ 'Barry' ရုပ်ရှင်အတွက်ပြသမည်။
David Brent: Netflix တွင်နေထိုင်သောလမ်းပေါ်မှဘဝကိုကြေငြာခဲ့သည်။ Ricky Gervais ၏ရုပ်ရှင်အသစ်သည်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၇ တွင် Netflix သို့လာမည်။
စိုးရိမ်တကြီးနဲ့စောင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်သတင်းကောင်းရှိတယ် David Brent: လမ်းပေါ်ရှိဘဝ။
izombie ၏ရာသီ3Netflix အပေါ်ထွက်လာကြပါဘူးသည့်အခါ
ရုပ်ရှင်၏ဖန်တီးသူနှင့်ကြယ်ပွင့် Ricky Gervais ၏အဆိုအရ David Brent: လမ်းပေါ်ရှိဘဝ Netflix တွင်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်၊ Netflix မရရှိနိုင်သည့်နိုင်ငံအားလုံးတွင်ဖြန့်ချိမည်။
Gervais ကကြေငြာခဲ့သည် လမ်းပေါ်ရှိဘဝ ကြာသပတေးနေ့တွင် twitter ပေါ်တွင်ဖြန့်ချိသည့်နေ့စွဲနှင့် Netflix ၏တရားဝင် twitter အကောင့်အခြေခံအားဖြင့်တရားဝင်ရဲ့အတည်ပြုချက်ဖြစ်သောတွစ်တာ, retweeted!
ကျနော်တို့အောက်က tweet shared!
သီးသန့်: #DavidBrent : #LifeOnTheRoad ထုတ်လွှင့်သည် @Netflix ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀
Sexy Back ကိုပြန်ယူလာပါ pic.twitter.com/Edt010qXBo
- Ricky Gervais (@rickygervais) အောက်တိုဘာလ 20, 2016
ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရတာငါထက်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာလူအနည်းငယ်ရှိကောင်းရှိမယ်။ Gervais ကရယ်စရာကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေဖန်တီးရာမှာပါရမီရှိတဲ့သူပါ၊ David Brent ဟာသူဖန်တီးခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးဇာတ်ကောင်ပါ။ ငါအထူးသဖြင့်ခရီးစဉ်အပေါ်ဂီတပညာရှင်အဖြစ်သူ၏သဘာဝအ setting ကိုအတွက်မစ္စတာ Brent ပိုမိုတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်!
မသိသောသူတို့အဘို့, David Brent ကနေ Gervais ရဲ့ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ် ရုံး Gervais သည်ပြဇာတ်ကို Stephen Merchant နှင့်ပူးတွဲဖန်တီးခဲ့သည်။ စီးရီးကို ၂၀၀၁-၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ကဲ့သို့သောတစ် ဦး စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ် ရုံး ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်သူသည်မိမိဂီတနှင့်အတူတိုင်းပြည် gracing နေစဉ်အင်္ဂလန်ခရီးစဉ်အဖြစ်သေးငယ်တဲ့စက္ကူကုမ္ပဏီ၏မန်နေဂျာအဖြစ်သူ၏အလုပ်အကိုင်အပြီးနောက် Brent ရဲ့ဘဝသို့ငုပ်။
Gervais သည်ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Brent ၏ဒရမ်သမားနှင့်တီးဝိုင်းပါ ၀ င်သူ Ben Bailey Smith နှင့်အတူရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး။ ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
Netflix တွင်ရုပ်ရှင်ဖြန့်ချိရန်သင်စောင့်နေစဉ် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ နှင့် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ အဆင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာစစ်ဆေးပါ။
ရုံး (U.K. ) သည် Netflix တွင်ထုတ်လွှင့်ရန်နှင့် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ တွင်ပါဝင်သည်။
el camino လွှတ်ပေးရန်အချိန် netflix
သေပြီ netflix လမ်းလျှောက်သစ်ရာသီ
Bates မိုတယ်ရာသီ3netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ